Galmudug & AMISOM oo ka wada hadlay kordhinta la dagaalanka Al-Shabaab - Awdinle Online
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad Goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa Maagada Magaalada Dhuusamareeb Caasimadda maamulka kulan kula qaatay Saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
Kulanka oo ka dhacay Xafiiska Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa waxa ka qayb galay Taliyaha qaybta afaraad ee ciidamada AMISOM Sector 4 Col. Cabdiraxmaan Riyaale xareed oo socdaal ku gaaray Dhuusamareeb.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa taliyaha war bixin ka siiyay muhiimada aay la haayeen howl galo maalmihii lasoo dhaafay laga sameeyay koonfurta Caasimadda Galmudug, kuwaas oo Ciidamada Milatariga iyo Nabadsugida ay sameeyen.
Taliyaha AMISOM Sector 4 Col Cabdiraxmaan Riyaale Xareed ayaa ku boggaadiyay dowladda Federaalka iyo kuwa Galmudug sida ay ula dagaalameen Al-shabaab waxaa a uu sheegay in Socdaalkooda u ku qotomay dhiirigalin iyo balaraanta Howlgalka AMISOM ee Galmudug.
Previous articleDowladda oo Muqdisho ku xirtay ganacsato xiriir la sameeyey Al-Shabaab
Next articleQoor Qoor oo gaaray Muqdisho & Shir ka furmaya